Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay Dal ka tirsan qaarada Yurub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 5 April 2021 5 April 2021
Allah ha u naxariistee, Haabiil Axmed Cabdullaahi oo da’diisa lagu sheegay 21 sano jir Somali-Canadian ah, ayaa Sabtidii lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada.
Sida warbaahintu ka soo xigatay Booliska magaalada Toronto, Allah ha u naxariistee Haabiil, waxa rasaas lagu furay isaga iyo qof kale oo la socday xilli ay marayeen agagaarka waddada Dixon iyo Scarlett, iyagoo watay gaari.
Boolisku waxay sheegeen ilaa iyo hadda weerarkan looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen laba qof oo madow ah oo da’doodu ay u dhaxeyso 20 ilaa 25 sano jir.
Gaariga ay wateen iyo laba bastoolad, ayay boolisku sheegeen in ay heleen, kadib markii eedeysanayaasha ay shil galeen xilli ay baxsanayeen, sidaasna ay uga carareen gaarigii ay wateen.